Foldable ဖုန်းနမူနာကို လာမယ့်လထဲ Samsung မိတ်ဆက်တော့မယ်
12 Oct 2018 . 10:01 PM
တစ်ခုမဟုတ် တစ်ခုထူးဆန်းတာလေး မလုပ်လိုက်ရရင် အငြိမ်မနေတတ်တဲ့ Samsung ၊ လွန်ခဲ့တဲ့ ၄ နှစ်တုန်းက Concept ချပြခဲ့ဖူးတဲ့ Foldable ဖုန်းပုံစံမျိုး လာမယ့်လထဲ မိတ်ဆက်သွားမယ်လို့ CEO ကြီး DJ Koh ကိုယ်တိုင် CNET သတင်းမှာ အတည်ပြုပြောကြားလိုက်ပါပြီ။
ဒီလိုသာဆိုရင်တော့ Huawei ၊ LG ၊ Lenovo တို့ထက် နှာတဖျားသာရုံမက ခေါက်ချိုးစမတ်ဖုန်း ထုတ်နိုင်တာ Samsung ပဲ ရှိတယ်လို့ တမင်ပြောလိုက်တာလား? ဖြစ်နိုင်ပါတယ်လေး၊ ဘာလို့လဲဆို Tablet ကိုတောင် ခေါက်ချိုးထားပြီး စမတ်ဖုန်းလိုရောသုံးနိုင်မယ်လို့ Koh ပြောကြားလိုက်တဲ့ အရိပ်မြွက်စကားလေးက ပြိုင်ဖက်တွေကို ဆွံအသွားစေခဲ့ပြီ။
Samsung Foldable Panel
Koh ကိုယ်တိုင်ကလည်း “User Experience က ငါ့အတွက် Standard မဟုတ်ဘူးဆိုရင် အခုလို ခေါက်ချိုးစမတ်ဖုန်းတွေ၊ 10th Anniversary Edition တွေ မထုတ်ချင်ဘူး” ပြောဆိုထားလို့ Samsung အနေနဲ့ အသွင်ပြောင်းတော့မယ် ထင်ပါတယ်။ တခုရှိမှာက ပြိုင်ဖက်တွေလည်း ငြိမ်နေကြမှာ မဟုတ်ဘူး၊ အရင်လတုန်းက Foldable ဖုန်းနမူနာကို Lenovo ချပြခဲ့ပြီးပြီ။
Lenovo Foldable Display
ဒီထဲမှာ ပြိုင်ဖက်ဖြစ်လာဦးမှာက LG ၊ 2018 ဆန်းသစ် နည်းပညာပြပွဲမှာတုန်းက Samsung ထက်အရင် Foldable OLED Panel မိတ်ဆက်ခဲ့တယ်။ Huawei နဲ့ Xiaomi တို့ကတော့ ထုံးစံအတိုင်း တရုတ် Supplier “BOE” Display နဲ့ ပဲ နှစ်ပါးသွားမယ်ထင်တာပဲ။
Bendable BOE Panel
ဒါကြောင့်မလို့ ဘယ်လိုပဲ Samsung မိတ်ဆက်မိတ်ဆက် ၂၀၁၈ ဟာ စမတ်ဖုန်းတွေရဲ့ နည်းပညာ အပြောင်းလဲ တစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ပြီဆိုတာ မြန်မြန်သရုပ်ပြချင်နေပြီ။ အခုလိုသာ တအံ့အသြဖြစ်သွားအောင် Samsung လုပ်တော့မယ်ဆိုတော့ လာမယ့် နိုဝင်ဘာ ၇ ရက်နေ့ဟာ Samsung အတွက် အချိန်အခါ ကောင်းဖြစ်လာနိုင်မလား..? လောလောဆယ်အထိတော့ နားစွင့်ထားရဦးမှာပါ။
Foldable ဖုနျးနမူနာကို လာမယျ့လထဲ Samsung မိတျဆကျတော့မယျ
တဈခုမဟုတျ တဈခုထူးဆနျးတာလေး မလုပျလိုကျရရငျ အငွိမျမနတေတျတဲ့ Samsung ၊ လှနျခဲ့တဲ့ ၄ နှဈတုနျးက Concept ခပြွခဲ့ဖူးတဲ့ Foldable ဖုနျးပုံစံမြိုး လာမယျ့လထဲ မိတျဆကျသှားမယျလို့ CEO ကွီး DJ Koh ကိုယျတိုငျ CNET သတငျးမှာ အတညျပွုပွောကွားလိုကျပါပွီ။
ဒီလိုသာဆိုရငျတော့ Huawei ၊ LG ၊ Lenovo တို့ထကျ နှာတဖြားသာရုံမက ခေါကျခြိုးစမတျဖုနျး ထုတျနိုငျတာ Samsung ပဲ ရှိတယျလို့ တမငျပွောလိုကျတာလား? ဖွဈနိုငျပါတယျလေး၊ ဘာလို့လဲဆို Tablet ကိုတောငျ ခေါကျခြိုးထားပွီး စမတျဖုနျးလိုရောသုံးနိုငျမယျလို့ Koh ပွောကွားလိုကျတဲ့ အရိပျမွှကျစကားလေးက ပွိုငျဖကျတှကေို ဆှံအသှားစခေဲ့ပွီ။
Koh ကိုယျတိုငျကလညျး “User Experience က ငါ့အတှကျ Standard တခုလိုမဟုတျဘူးဆိုရငျ အခုလို ခေါကျခြိုးစမတျဖုနျးတှေ၊ 10th Anniversary Edition တှေ မထုတျခငျြဘူး” ပွောဆိုထားလို့ Samsung အနနေဲ့ အသှငျပွောငျးတော့မယျ ထငျပါတယျ။ တခုရှိမှာက ပွိုငျဖကျတှလေညျး ငွိမျနကွေမှာ မဟုတျဘူး၊ အရငျလတုနျးက Foldable ဖုနျးနမူနာကို Lenovo ခပြွခဲ့ပွီးပွီ။
ဒီထဲမှာ ပွိုငျဖကျဖွဈလာဦးမှာက LG ၊ 2018 ဆနျးသဈ နညျးပညာပွပှဲမှာတုနျးက Samsung ထကျအရငျ Foldable OLED Panel မိတျဆကျခဲ့တယျ။ Huawei နဲ့ Xiaomi တို့ကတော့ ထုံးစံအတိုငျး တရုတျ Supplier “BOE” Display နဲ့ ပဲ နှဈပါးသှားမယျထငျတာပဲ။
ဒါကွောငျ့မလို့ ဘယျလိုပဲ Samsung မိတျဆကျမိတျဆကျ ၂၀၁၈ ဟာ စမတျဖုနျးတှရေဲ့ နညျးပညာ အပွောငျးလဲ တဈခုဖွဈလာခဲ့ပွီဆိုတာ မွနျမွနျသရုပျပွခငျြနပွေီ။ အခုလိုသာ တအံ့အသွဖွဈသှားအောငျ Samsung လုပျတော့မယျဆိုတော့ လာမယျ့ နိုဝငျဘာ ၇ ရကျနဟေ့ာ Samsung အတှကျ အခြိနျအခါ ကောငျးဖွဈလာနိုငျမလား..? လောလောဆယျအထိတော့ နားစှငျ့ထားရဦးမှာပါ။